Mivavaka aminao ry Ray, mandohalika miankohoka ;
Mivavaka, eny mitalaho re, ho an’ny Tanindrazanay.
Latsaka lalina loatra, ao anaty lavaka mampikohoka
Izay rehetra raisina, ilaina toa mandoro sy mahamay.
Maro loatra ny zava-misy, eny, tena mampitahotra ;
Vono olona sakan-dàlana, heno manerana ny Nosinay.
Vonjeo re, ampio, andefaso ny anjelinao tsy hiahotra,
Dia hiaina ampilaminana, izahay sy ireo taranakay.
Izay rehetra jerena, banjinina, toa tontolo tena resy ;
Misavoritaka isanandro, tena mampitaintaina anay.
Atao ahoana anefa moa, izao no asan’i Ikotofetsy,
Sy Imahaka, mibodo sy mamotika ny Tanindrazanay.
Raha henonao ry Ray, ny sentonay izay mipololoitra ;
Atao amin'ny anaran'i Tompo ilay mpisolo vava anay.
Izahay mino manantena, fa na inona na inona hipoitra,
Dia eo foana Ianao, hiahy anay sy ny Tanindrazanay.
Sokajy : Fahantrana, fiainana, Tanindrazana, Tonto
Sokajy : Fahantrana, fiainana, Tanindrazana, Tontolo iainana, Vavaka